Face Book Picks « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » Face Book Picks
Face Book Picks
Infrastructure Development alone cannot sort out the issues in Burma. We need political stability which should be developed at the same time.
The most important underlying cause with the ethnics and the recent government isafailure to build mutual trust among them. The repeated fail actions of breaking the promises from the government is the biggest challenges the ethnics are facing today.
The only solution to achieve genuine peace within the country is only when the government could prove their sincerity not by plotting against the ethnics but by their reliable and consistent actions.
Negative emotions are very addictive. They actually release endorphins into the body which provideavery pleasant sensation. Consider stubbing your toe. Endorphins are also released. The sensation as the pain fades away can be euphoric. As crazy as it sounds this is what is going on with negative emotions. People become addicted to the release of endorphins produced as the negative pain caused by the emotion fades away. They developaneed for negative emotions to get the endorphin payoff. It is exactly like being addicted toadrug.
The German solar power plants producedaworld record 22 Gigawatts of electricity i.e. equal to 20 nuclear power stations at full capacity.
ဒီနေ့ဖတ်ရတဲ့ သတင်းထဲမှာ မင်္ဂလာအရှိဆုံးသတင်းပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်တွေကို ၂၄နာရီလုံး ထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့ မဟာဗောဓိရုပ်သံလိုင်းကို စတင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လူတိုင်းကောင်းစွာနားလည်နိုင်ဖို့ ခုလို ဗုဒ္ဓဘာသာရုပ်သံလိုင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ မျှော်လင့်နေတာကြာပါပြီ။ the voice journal က ဒီသတင်းဖတ်ရတာ အင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ radio တွေ fm လိုင်းတွေပါပါပေါ်ထွက်လာစေချင်ပါတယ်။ တရားတော်တွေကိုပဲ ၂၄နာရီလွှင့်ပေးတဲ့ လိုင်းတွေအပြင် လူငယ်တွေကိုပါ ဆွဲဆောင်နိုင်အောင် ဘာသာရေး၊ ပညာပေးနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအစီအစဉ်တွေ ဘာသာရေးဥာဏ်စမ်းအစီအစဉ်တွေ ပေါင်းစပ်ထားတာတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ဓမ္မရုပ်သံလိုင်းတွေလည်း စီစဉ်စေချင်ပါသေးတယ်။
ရုပ်ဝတ္ထု စေတီ တည်တာတွေဟာ ကုသိုလ်အင်မတန်ရပေမဲ့ သာသနာတော်ကို မစောင့်ရှောက်နိုင်ပါဘူး။ သာသနာပျောက်သွားတဲ့အခါ အဖျက်စီးခံရတာပဲ။
အာဖဂနစ္စတန်က ရုပ်ပွားတော်တွေ အမြောက်နဲ့အပစ်ခံရတဲ့ကိစ္စကြည့်ပါ။ ခုလို ဓမ္မရုပ်သံလိုင်းတွေကနေ နှလုံးသားမှာ ဘုရားတည်ပေးတာက သာသနာတော်ကိုပိုပြီး စောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အစွန်းရောက် မွတ်ဆလင်တွေ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်တာတွေ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေ ဘာသာတူဖြစ်တဲ့ဆွန်နီ ရှီးအိုက် အချင်းချင်းတောင် ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ကြတဲ့ သတင်းတွေပါ ထည့်သွင်းပြသစေလိုပါတယ်။
လူကြီးမိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ sunday school တို့မပို့နိုင်ရင်တောင် ဗုဒ္ဓရုပ်သံလိုင်းတွေကို ကြည့်ရှုဖို့ စည်းရုံးပြီး လူငယ်တွေနဲ့ ဘာသာရေးအဆုံးအမတွေနဲ့ နီးစပ်အောင် ကြိုးစားကြစေလိုပါတယ်။ လူငယ်တိုင်း မိမိဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့တန်ဖိုးကို သေချာနားလည်မှသာလျှင် ကိုယ့်ဘာသာကို ခြေစုံကန်ပြီး ဘာသာခြား၊လူမျိုးခြားတွေကို လက်ထပ်တာတွေ လျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံမှာ အမျိုးသားရေးဝါဒကိုအခြေခံမှုများလာတယ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်။ အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ ချဉ်းကပ်တာဟာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့။ ပြောချင်တာက ဒီလို အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်လာနိုင်မလား။ အမျိုးသားရေးရပ်တည်ချက်မရှိရင် နိုင်ငံရေးသမားမလုပ်နဲ့ပေါ့။ အမျိုးသားရေးရပ်တည်ချက်မရှိရင် နိုင်ငံခြားသြဇာခံ၊ နိုင်ငံခြားရဲ့ လွှမ်းမိုးတာကိုခံရမှာပေါ့။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသွားလို့ အမျိုးသားရေးရပ်တည်ချက် ကို ပယ်မယ်ဆိုရင် လူဦးရေအင်အားများတဲ့ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာနေနေရတာ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အမျိုးသားရေးရပ်တည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင် ကပြားတွေရဲ့ နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ သိမ်းပိုက်ခံရတဲ့ ပြည်နယ်လေးဖြစ်သွားမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အမျိုးသားရေးရပ်တည်ချက်က ဒီမိုကရေစီရပ်တည်ချက် လိုပဲ အရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရပ်တည်ချက် သဘောထားကတော့ ဒီနေ့တချို့ပါတီမှာ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် တစ်စုံတစ်ရာအားရစရာရှိတယ်။ သို့သော် အမျိုးသားရပ်တည်ချက် အားနည်းတဲ့အတွက် အဲဒီလိုပါတီမျိုးကလည်း တိုင်းပြည်ကို ရေရှည်ခေါင်းဆောင်မှုပေးရင် ဒီတိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးဖြစ်မလား။ ဒါလည်း ပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်။ နောက် တချို့ပါတီကျတော့လည်း အမျိုးသားရေးရပ်တည်ချက်ရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီရေးရပ်တည်ချက်ကျတော့ မရှိဘူး။ ဒီလိုပါတီကို တိုင်းပြည်က အားပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်သဘောပြောမယ်ဆိုရင် ဒီ ၂၀၁၅ မှာ မြန်မာပြည်ကြီး အဓွန့်ရှည်တဲ့အထိ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ အမျိုးသားရေးကို ပေါင်းစပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ကျန်းကျန်းမာမာ၊ ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ နိုင်ငံရေးအတွက် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကို မရောထွေးဖို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက အချို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ဥပမာ မျိုးစောင့်ဥပဒေလိုမျိုးပေါ့။ ၂၀၁၅ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြောဆိုနေတာ တွေကိုရော ဘယ်လိုပြောမလဲ။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ကြီးကြပ်တဲ့တာဝန်ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေမှာလည်း ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအရ အလွဲသုံးစားမလုပ်ရဘူးဆိုတာ ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားပဲ။ ဒီဟာကို ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူလို့ရတာပဲ။ သို့သော် မျိုးစောင့်ဥပဒေကို တင်ပြတာဟာ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအရ အလွဲသုံးစား လုပ်တယ်လို့တော့ ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကို သူတို့ဖော်ထုတ်တာပဲ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်ဆီ ခုထက်ထိ မျိုးစောင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်ပေးပို့လာတာကတော့ မရှိသေးဘူး။ အကယ်၍ ပေးပို့လာခဲ့ရင် ကျွန်တော်ကြေညာထားပြီးသား။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးများ အထူး ထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှုဥပဒေကို ပြန်ပြင်တဲ့အခါမှာ အဲဒီအချက်ကို ထည့်ပြီးသုံးမှာ။ ဒါက မျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာ မပေါ်ခင်ကတည်းက သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုး သမီးများ ထိမ်းမြားခြင်းနဲ့ အမွေဆက်ခံမှုဥပဒေကို ပြင်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား။ ဒီလိုဘာကြောင့် စိတ်ကူးရတာလဲဆိုတော့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆီကို လိပ်မူပြီး ကျွန်တော့်ဆီကို မိတ္တူပို့တာရှိတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ အင်မတန်မှအရေးပါတဲ့ ထေရ၀ါဒသံဃာတော်ကြီးတွေက ပေးပို့တာရှိတယ်။ မျိုးစောင့် ဥပဒေမပေါ်ခင်ကတည်းက စဉ်းစားထားတာ၊ သို့သော် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဟိုလူ့ခလုတ်တိုက်မှာမို့၊ ဒီလူ့ခလုတ်တိုက်မှာတို့ကြောင့် ကျွန်တော်ထိန်းနေတာ။ အခုလူပြောများနေတဲ့ သမ္မတရဲ့ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။ ကျွန်တော့်ဆီပို့လာတဲ့စာထဲမှာ ၅၉ (စ) ကို ပြင်ပေးဖို့စာမပါဘူး။ ၅၉ (စ) ကို ပြင်ပေးလိုက်မယ် ဆိုရင် နိုင်ငံအနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုစိုးရိမ်တယ်ဆိုတဲ့ စာပဲပါတယ်။ လွှတ်တော်က ပြောပြောနေတဲ့ ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော်အသံဆိုရင်တော့ ကျွန်တာ် အခုရောက်နေတဲ့စာတွေကိုပဲ ကိုယ်စားပြုရမယ်။ Messenger News Journal (29.9.2013) ပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အတွင်းလူက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အတွင်းလူတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ကွာခြားလဲ ဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်ချက် ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကို အောက်ပါလင့်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422187781226266&set=a.403102959801415.1073741827.402613996516978&type=1&relevant_count=1 photo
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 05/10/2013 .
← ၁၃၀၀ပြည့်ရေနံမြေအရေးတော်ပုံ စိန်ရတုဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ	Myanmar: People Network for Constitutional Reform ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ကွန်ယက် →